Njegharị Balloon malitere na Kayseri | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region38 KayseriNjem Balloon malitere na Kayseri
17 / 11 / 2019 38 Kayseri, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey
Njem balloon kayseride bidoro
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç tinyekwara ọrụ dị mkpa na mbọ a na-eme ka Kayseri bụrụ obodo njem na mpaghara niile. N'ihi ọrụ nke Onye isi ala Büyükkılıç, njem njem balloon bidoro na mpaghara Soğanlı ma emere ụgbọ elu mbụ n'isi ụtụtụ. Mayor Büyükkılıç tinyekwara aka na ụgbọ elu mbụ.
Njem ntụrụndụ Balloon, nke bụ ọrụ dị mkpa maka ịmegharị njem Kayseri, malitere na Kayseri. Na ụgbọ elu mbụ dị na mpaghara Soğanlı, ballolo atọ kwụsịrị. Flightgbọ elu nke mbu, Onye isi obodo Mayor Dr. Memduh Büyükkılıç, yana Gọvanọ Şehmuz Günaydın, Mịnịsta nke Energy na eke akụ na ụnyaahụ Taner Yildiz, onye isi ndị agha Garrison Brigadier General Ercan Teke na Yesilhisar Mayor Halit Tasyapan sonyekwara. Tupu ụgbọ elu ahụ kwupụta okwu na oge gara aga Energy na Natural Resources Minister Taner Yildiz, njem balloon ahụ ga-enye ezigbo onyinye maka njem na Kayseri, o kwuru. Yildiz, onye na-achọ ka ụgbọ elu a na-ahụ balloon mara mma, kwuru, sị: “Kayseri ga-enwe aha ọma ma ọ bụghị maka ụlọ ọrụ na azụmahịa ya kamakwa maka njem ya.
Ọ B STGH FOR akwụsị njem
Mayor Memduh Büyükkılıç kwuru na nkwupụta ya na Kayseri, nke bụ ebe etiti na ụlọ ọrụ na-aga n'ihu, na-aga n'ihu na-eme ka ọ bụrụ ebe nlegharị anya dị. Onye isi obodo Büyükkılıç kwuru na otu n'ime ọrụ kachasị mkpa maka njem nlegharị anya ejiri ụgbọ elu balloon ma kelee ndị nyere onyinye ahụ. Na-eme ihe omumu gbasara gastronomy, Kültepe gara n'ihu na-arụsi ọrụ ike, chetaara na ha na-anwa iweta onyeisi obodo Büyükkılıç njem nleta ahụike, "Kwụsị ka ị gaa n'ihu na -eme njem nleta Kayseri," ka o kwuru.
Gọvanọ Şehmus Günaydın, na-ekwu maka ụbọchị dị mkpa nke Onye Ọchịagha Garrison Brigadier General Ercan Teke gara na ebumnuche '' jisie ike ', kwuru, "Otu atụmatụ dị mkpa maka Kayseri. Anyi na-ekele ndi na akwado. Anyị achịkọtala ebe ọrụ anyị niile ka anyị nwee ike jiri Kayseri mee njem dị mma.
Otu dị mma na-enweghị atụ
Mgbe ọkwa ahụ gasịrị, njem nlegharị balloon malitere na Kayseri na ụgbọ elu ndị mbụ mere. N'isi ụtụtụ, ụgbọ elu mbụ nke balloons atọ wepụrụ Kayseri protocol tinyere aka. A na-ekiri ọmarịcha pụrụ iche nke ndagwurugwu Soğanlı na ọdịda anyanwụ si na ballo ndị na-apụ.
Ụgbọ njem na-ebufe ndị mmadụ na-amalite na Kayseri
Njem njem njem malitere na Ordu
Xnumx'inc nke UITP Conference ẹkenịmde ke Kayseri, Turkey
Onyinye Egwu maka Ụgbọ njem na Kayseri
Ejiri Kayseri's Master Plan of Transportation
CHP Arik: "Olee mgbe ụgbọ okporo ígwè ga-aga Kayseri?"
Mayor Çelik, Transportgbọ njem na Kayseri…
Enweghi ike igbochi Ulo oru na Kayseri
Nke a bụ ntọala nke ahịrị New Rail Sistemụ Kayseri Bu
Egwú na-arụ ọrụ na Kayseri
Ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ atọ na Crosss Na Kayseri ga-aga site na ala
Njem Kayseri Balloon